1914-1918: ဘုရားသခင်ကိုသတ်သောစစ်ပွဲ - Worldwide Church of Switzerland
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ 2014-04 > 1914-1918: ဘုရားသခင်ကိုသတ်သောစစ်
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော်ကစစ်ပွဲသို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့ကြသောဂျာမန်စစ်သားများစွာတို့သည်ခါးပတ်သော့ခတ်ထားသောနေရာတွင်ယနေ့ခေတ်တွင်ထူးဆန်းနေပုံရသည်။ ဤသမိုင်းမှတ်တမ်းမှအနည်းငယ်ပြန်ပြောပြခြင်းက ၁၉၁၄-၁၉၁၈ မှပထမကမ္ဘာစစ်သည်ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်နှင့်ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ချက်အပေါ်မည်မျှအကြီးအကျယ်ပျက်စီးသွားမည်ကိုပိုမိုနားလည်စေသည်။ သင်းအုပ်ဆရာများနှင့်ယဇ်ပုရောဟိတ်များသည်သူတို့၏အသင်း ၀ င်လူငယ်များအားဘုရားသခင်ကသူတို့ပိုင်သောနိုင်ငံ၏ဘက်မှာရှိမည်ဟုကတိပေးခဲ့သည်ကိုသူတို့ကတိက ၀ တ်ဖြင့်အာမခံခဲ့သည်။ စစ်ပွဲတွင်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင်ပါ ၀ င်မှုအားဆန့်ကျင်။ ဂျာမန်နှစ်သန်းအပါအ ၀ င်လူပေါင်း ၁၀ သန်းနီးပါး၏အသက်ကိုဆုံးရှုံးစေခဲ့သည်။
ရိုမန်ကက်သလစ်ဘာသာရေးပညာရှင် Gerhard Lohfink က“ ခရစ်ယာန်များသည် ၁၉၁၄ ခုနှစ်တွင်ခရစ်ယာန်များအားစိတ်အားထက်သန်စွာစစ်ဆင်နွှဲခဲ့ခြင်း၊ နှစ်ခြင်းခံခြင်းဖြင့်ဗတ္တိဇံခံခြင်းကိုဘုရားရှိခိုးကျောင်းအားဖျက်ဆီးခြင်းအဖြစ်မှတ်ယူခဲ့သည်” ဟုတိကျစွာခြေရာခံခဲ့သည်။ လန်ဒန်ဘိရှော့ပ်ကဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုဘုရားရှိခိုးရန်နှင့်ဘုရားကိုကိုးကွယ်ရန်တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ကြားနေဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်သင်းအုပ်ဆရာကားလ်ဘာ့တ်သည်သူ၏ဓမ္မဆရာများသည်“ An Waffen” ဟူသောစစ်ပွဲငိုကြွေးမှုကိုစိတ်လိုကိုယ်လျောက်ကျူးကျော် ၀ င်ရောက်ခြင်းကြောင့်အဓိကသင်းအုပ်ဆရာကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။ ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော“ ခရစ်ယာန်ကမ္ဘာ” မဂ္ဂဇင်းတွင်သူက“ စစ်ပွဲနှင့်ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းအတွက်တပ်မက်မှုသည်မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့နေသောရှုပ်ထွေးမှုနှင့်ရောနှောနေသည်ကိုတွေ့ရခြင်းမှာ ၀ မ်းနည်းစရာပင်” ဟုသူကန့်ကွက်ခဲ့သည်။
သမိုင်းပညာရှင်များအနေဖြင့်ပofိပက္ခ၏တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်အကြောင်းရင်းများကိုဘော်လကန်ဒေသငယ်လေးမှစတင်ခဲ့ပြီးဥရောပ၏အင်အားကြီးနိုင်ငံများနှင့်ပါ ၀ င်ပတ်သက်ခဲ့သည်။ ပြင်သစ်သတင်းစာဆရာရေမွန်အာရွန်က“ ရာစုနှစ်လုံးလုံးစစ်ပွဲ” စာမျက်နှာ ၁၆ ရှိသူ၏အလုပ်တွင်ဤသို့အတိုချုပ်ဖော်ပြခဲ့သည် -“ တိုးပွားလာသောတင်းမာမှုများသည်အဓိကပconflictိပက္ခသုံးခု - သြစတြီးယားနှင့်ရုရှားအကြားပြိုင်ဆိုင်မှု ဘော်လကန်များတွင်မော်ရိုကိုရှိ Franco- ဂျာမန်ပconflictိပက္ခနှင့်လက်နက်ပြိုင်ပွဲ - ဂရိတ်ဗြိတိန်နှင့်ဂျာမနီအကြားပင်လယ်နှင့်အင်အားကြီးနိုင်ငံများအကြားမြေပေါ်တွင်။ စစ်ပွဲ၏အကြောင်းရင်းနှစ်ခုကြောင့်အခြေအနေကိုလမ်းခင်းပေးခဲ့သည်။ ယခင်မီးပွားပေး။
ယဉ်ကျေးမှု သမိုင်းပညာရှင်များသည် အကြောင်းတရားများ၏ အောက်ခြေသို့ ပို၍ပင် ရောက်သွားကြသည်။ ၎င်းတို့သည် အမျိုးသားမာန်မာနနှင့် အကြောက်တရားများကဲ့သို့ ခက်ခဲသောဖြစ်ရပ်များကို စူးစမ်းလေ့လာကြပြီး ၎င်းတို့သည် အများအားဖြင့် အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ Düsseldorf သမိုင်းပညာရှင် Wolfgang J. Mommsen က ဤဖိအားကို အကျဉ်းချုံးဖော်ပြခဲ့သည်- "၎င်းသည် ဤအတွက် အခြေခံကို ဖန်တီးပေးသော မတူညီသော နိုင်ငံရေးနှင့် ဉာဏစနစ်များအကြား ရုန်းကန်မှုဖြစ်သည်" (အင်ပါယာဂျာမနီ ၁၈၆၇-၁၉၁၈ [ဂျာမနီ: ဂျာမန်အင်ပါယာ 1867-1918]၊ P. 1867 ) 1918 ခုနှစ်တွင် အမျိုးသားရေး တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်မှုနှင့် မျိုးချစ်စိတ်တို့ စွဲလမ်းခဲ့သော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတည်း မဟုတ်သည်မှာ သေချာပါသည်။ နေမ၀င်သော အင်ပါယာတစ်ခုတွင် ၎င်းတို့၏ တော်ဝင်ရေတပ်သည် ကမ္ဘာ၏ လေးပုံတစ်ပုံကို အုပ်စိုးကြောင်း တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာဖြင့် မှတ်ချက်ချခဲ့သည်။ ပြင်သစ်တို့သည် ပါရီမြို့ကို အီဖယ်မျှော်စင်ကို ဖန်တီးမှုနည်းပညာကို အသုံးပြုခြင်းအတွက် သက်သေပြခဲ့သည်။
ထိုစဉ်ကဂျာမန်စကားတွင်“ ပြင်သစ်၌ဘုရားသခင်ကဲ့သို့ပျော်ရွှင်သည်” ဟုဖော်ပြထားသည်။ သူတို့၏အထူး“ ယဉ်ကျေးမှု” နှင့်ရာစုနှစ်တစ်ဝက်တိကျခိုင်မာစွာပြီးမြောက်အောင်မြင်မှုများနှင့်အတူဂျာမန်များသည်သမိုင်းတွင်သူဘာဘရာ Tachman ပြောကြားသကဲ့သို့သူတို့ကိုယ်သူတို့သာလွန်သည်ဟုရှုမြင်ကြသည်
"ဂျာမန်တွေက သူတို့မှာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အပြင်းထန်ဆုံး စစ်အင်အားနဲ့ စွမ်းရည်အရှိဆုံး ကုန်သည်တွေနဲ့ အတက်ကြွဆုံး ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွေ ရှိပြီး တာ့ခ်တွေကို ဘာလင်ကနေ ဘဂ္ဂဒက်အထိ မီးရထားလမ်းလိုင်းနဲ့ လက်တင်အမေရိက ကုန်သွယ်ရေးအတွက် ဘဏ္ဍာငွေထောက်ပံ့ပေးတဲ့ တိုက်ကြီးအားလုံးကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နေတာကို ဂျာမန်တွေက သိပါတယ်။ သူ့ဟာသူချည်နှောင်; ၎င်းတို့သည် ဗြိတိသျှရေတပ်၏ စွမ်းအားအတွက် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သိရှိကြပြီး သိပ္ပံနည်းကျ နိယာမအရ အသိပညာ၏ ကဏ္ဍအသီးသီးကို စနစ်တကျ တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ သူတို့သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် လွှမ်းမိုးထားသော အခန်းကဏ္ဍမှ ထိုက်တန်စွာ ပါဝင်ခဲ့ကြသည် (The Proud Tower, p. 331)။
၁၉၁၄ ခုနှစ်မတိုင်မီ ယဉ်ကျေးသောကမ္ဘာကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွင် “မာန” ဟူသောအသုံးအနှုန်းသည် မည်မျှမကြာခဏပေါ်လာသည်ကို သတိပြုမိပြီး သမ္မာကျမ်းစာ၏ဗားရှင်းတိုင်းသည် “မာနသည် ကျဆုံးခြင်းသို့မရောက်မီ” ဟူသော စကားပုံကို ပြန်လည်ထုတ်ဝေသည်ဟူ၍ မဖော်ပြထားသင့်ဘဲ၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၁၉၈၄ ခုနှစ်မှ လူသာသမ္မာကျမ်းစာတွင် မှန်ကန်သောအသုံးအနှုန်းတွင် “ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်သောသူသည် ဦးစွာဂုဏ်ယူတတ်၏” ဟူ၍လည်းဖော်ပြထားသည် (သု. ၁၊6,18).
ပျက်စီးခြင်းသည်အိမ်များ၊ ခြံများနှင့်အချို့သောမြို့ငယ်များ၏ယောက်ျားများအားလုံး၏အဓိကစိုးရိမ်ပူပန်မှုမဟုတ်ပါ။ အချို့သောဥရောပနိုင်ငံများယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းကိုထိခိုက်စေသည့်ဒဏ်ရာသည်“ ဘုရားသခင့်သေခြင်း” ဖြစ်သည်ဟုယူဆရသည်။ ၁၉၁၄ မတိုင်မီဆယ်စုနှစ်များအတွင်းဂျာမနီ၌ချာ့ချ်တက်သူအရေအတွက်ကျဆင်းခဲ့ပြီးခရစ်ယာန်ယုံကြည်မှုဓလေ့ကိုအနောက်ဥရောပတစ်ခွင်တွင်“ နှုတ်ဆောင်ခြင်း” ပုံစံဖြင့်ကျင့်သုံးခဲ့သော်လည်းလူများစွာအတွက်ကြင်နာတတ်သောဘုရားသခင်အပေါ်ယုံကြည်မှုသည်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောကြောင့် တုတ်ကျင်းများတွင်သွေးထွက်သံယိုမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးယခုအချိန်အထိမသိသေးသောသတ်ဖြတ်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
စာရေးသူ Tyler Carrington မှဗဟိုဥရောပနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပြီးနောက်ဘုရားကျောင်းသည်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ၁၉၂၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနောက်ပိုင်းတွင်ဆုတ်ခွာခဲ့ရသည်၊ ပို၍ ဆိုးသည်မှာယနေ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်သူ ဦး ရေသည်မကြုံစဖူးနိမ့်ကျနေသည်။ ၁၉၁၄ မတိုင်မီရွှေခေတ်ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းပြောဆိုခြင်းသည်ထိုသို့မဟုတ်ပါ။ ဘာသာရေးစခန်းမှနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများကြောင့်သမိုင်းဆိုင်ရာဝေဖန်ရေးနည်းစနစ်ကိုထောက်ခံသူများအားဘုရားသခင့်ဖွင့်ဟချက်အပေါ်ယုံကြည်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ စဉ်ဆက်မပြတ်တိုက်စားမှုဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၁၈၃၅ နှင့် ၁၈၃၆ အကြားတွင်ဒေးဗစ်ဖရီဒရစ်စထရတ်၏ 'ယေရှု၏ဘဝအသက်တာသည်ခရစ်တော်၏ဘုရားသခင့်အစဉ်အလာနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။ ကိုယ်ကျိုးမငဲ့ဘဲကိုယ်ကျိုးစွန့်စိတ်ဓာတ်ရှိသူအဲလ်ဘတ်ရှဝိုက်ဇ်ကပင်ယေရှုအားသူ၏ ၁၉၀၆ ခုနှစ်ထုတ်ဘဝ - ယေရှုသုတေသန၏သမိုင်းကြောင်းတွင်သူ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိတရားဟောဆရာကိုသရုပ်ဖော်ခဲ့သည်။ သို့သော်ဤအယူအဆသည်သန်းနှင့်ချီသောဂျာမန်များနှင့်အခြားဥရောပသားတို့က ၁၉၁၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင်သတိပြုမိလာသည့်စိတ်ပျက်ခြင်းနှင့်သစ္စာဖောက်မှုနှင့်အတူ“ အလွန်အရေးကြီးသောအစုလိုက်အပြုံလိုက်” သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ပုံဆွဲဘုတ်တွင် Freud ၏စိတ်ပညာ၊ အိုင်းစတိုင်းသီအိုရီနှိုင်းယှဉ်မှု၊ မာ့က်စ်ဝါဒ - လီနင်နှင့်စသည်တို့အပြင် Friedrich Nietzsche ၏“ ဘုရားသခင်သည်သေပြီ၊ ငါတို့သူ့ကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။ ပထမကမ္ဘာစစ်မှအသက်ရှင်လွတ်မြောက်လာသူများစွာသည်သူတို့၏အုတ်မြစ်များကိုပြန်လည်တွန်းလှန်နိုင်ခဲ့သည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ ၁၉၂၀ ပြည့်နှစ်များကအမေရိကတွင်ဂျက်ဇ်ဂီတကိုစတင်ခဲ့သော်လည်းဂျာမန်လူမျိုးများအတွက်အလွန်ခါးသီးသောကာလစတင်ခဲ့ပြီးရှုံးနိမ့်ခြင်းနှင့်စီးပွားရေးပြိုလဲခြင်းတို့ကြောင့်ခံစားခဲ့ရသည်။ ၁၉၂၂ ခုနှစ်တွင်ပေါင်မုန့်တစ်လုံးသည် ၁၆၃ မှတ်ဖြစ်ပြီး ၁၉၂၃ ခုနှစ်အထိသန်းပေါင်း ၂၀၀ ခန့်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရရှိခဲ့သည်။
လက်ဝဲယိမ်း Weimar Republic (1919-1933) သည် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အောင်မြင်ရန် ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း၊ Erich Maria Remarque သည် သူ၏လက်ရာ Im Westen တွင် အသစ်အဆန်းမဟုတ်သည့် စစ်ပွဲ၏ နိမိတ်ဆန်သော မျက်နှာဖြင့် သန်းပေါင်းများစွာကို စွဲလန်းသွားခဲ့သည်။ စစ်သားများသည် ရှေ့တန်းမှ ဝေးကွာသော စစ်ပွဲအကြောင်း ပြောနေကြသည့် ကွာဟချက် ကွာဟမှုကြောင့် ကြွက်၊ ခြင်၊ အခွံတွင်း၊ လူသားစားခြင်းနှင့် အကျဉ်းသားများကို ပစ်သတ်ခြင်း စသည့်ဖြင့် အကျဉ်းသားများကို သတ်ဖြတ်ခြင်း စသည့်ဖြင့် ၎င်းတို့အား ကြွက်နှင့် အကျဉ်းသားများအား ပစ်သတ်ခြင်း စသည့် အဖြစ်မှန်များကြား ကွာဟချက်ကြောင့် ပျက်စီးခဲ့ရသည်။ စစ်ပွဲ။ “ကျွန်ုပ်တို့၏တိုက်ခိုက်မှုများသည် တေးဂီတသံများဖြင့် လိုက်ပါသွားကြောင်း ကောလာဟလများ ပျံ့နှံ့နေပြီး ကျွန်ုပ်တို့အတွက် စစ်ပွဲသည် သီချင်းနှင့် အောင်ပွဲ၏ ရှည်လျားသော ကယောင်ကတမ်းဖြစ်မှု […] ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲဒါက ငါတို့မျက်စိရှေ့မှာပဲ” (ဖာဂူဆန်၊ The War of the World, p. 119) မှကိုးကား။
နောက်ဆုံးတွင် လက်နက်ချသော်လည်း ဂျာမန်တို့သည် အမေရိကန်သမ္မတ Woodrow Wilson ချမှတ်သည့် အခြေအနေများအောက်တွင် သိမ်းပိုက်ရေးတပ်ကို လက်ခံခဲ့ရသည် - လျော်ကြေးငွေ ဒေါ်လာ 56 ဘီလီယံဖိုး ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြင့် အရှေ့ဥရောပတွင် ကြီးမားသော နယ်မြေများ ဆုံးရှုံးခြင်း (အနည်းဆုံး အများဆုံးမဟုတ်)၊ ၎င်း၏ ကိုလိုနီနယ်မြေများ) နှင့် ကွန်မြူနစ်အုပ်စုများ၏ လမ်းပေါ်ထွက်တိုက်ပွဲများကြောင့် ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ 1919 ခုနှစ်တွင် ဂျာမန်တို့ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သော ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ သမ္မတ Wilson ၏ မှတ်ချက်မှာ ဂျာမန်လူမျိုးဖြစ်လျှင် ၎င်းကို လက်မှတ်မထိုးနိုင်ဟု ဆိုသည်။ ဗြိတိသျှ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင် Winston Churchill က “ဒါဟာ ငြိမ်းချမ်းရေး မဟုတ်ဘဲ အနှစ် ၂၀ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးပဲ” လို့ ကြိုပြောထားပါတယ်။ သူဘယ်လောက်မှန်ခဲ့လဲ။
ဤစစ်လွန်နှစ်များတွင် ယုံကြည်ခြင်းသည် ကြီးမားသော ဆုတ်ယုတ်မှုများ ခံစားခဲ့ရသည်။ သင်းအုပ်ဆရာ Martin Niemöller (1892-1984)၊ သံလက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုကိုင်ဆောင်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် နာဇီတို့၏ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံခဲ့ရပြီး 1920 ခုနှစ်များတွင် "အမှောင်နှစ်များ" ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ထိုအချိန်တွင်၊ ဂျာမန်ပရိုတက်စတင့်အများစုသည် လူသာရန် သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထားသောချာ့ခ်ျ ၂၈ ခုမှဖြစ်ပြီး အချို့မှာ နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် သို့မဟုတ် မက်သဒစ်များဖြစ်သည်။ Martin Luther သည် နိုင်ငံရေးအာဏာပိုင်များအား နာခံမှုအား ပြင်းထန်စွာ ထောက်ခံအားပေးသူဖြစ်ပြီး မည်သည့်စရိတ်မဆို နီးပါးဖြစ်သည်။ 28 ခုနှစ် Bismarck ခေတ်တွင် နိူင်ငံတော် နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းချိန်အထိ ဂျာမန်မြေပေါ်ရှိ မင်းသားများနှင့် ဘုရင်များသည် ဘုရားကျောင်းများကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ အများသူငှာ ပြင်းထန်သော အမည်ခံဝါဒအတွက် အကောင်းဆုံးအခြေအနေများကို ဖန်တီးပေးခဲ့သည်။ ကမ္ဘာကျော် ဓမ္မပညာရှင်တို့သည် နားလည်ရခက်သော ဓမ္မပညာနယ်ပယ်များကို ဆွေးနွေးကြသော်လည်း ဂျာမနီရှိ ဘုရားကျောင်းများသည် ခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာများ၏ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကို အများစုလိုက်နာကြပြီး ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုဆန့်ကျင်ရေးအသင်းတော်သည် ယနေ့ခေတ်၏ အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ ဂျာမနီသတင်းထောက် William L. Shirer က ပထမကမ္ဘာစစ်အပြီး ဘာသာရေးကွဲပြားမှုအကြောင်း အစီရင်ခံတင်ပြသည်-
Weimar Republic ပင်လျှင် ပရိုတက်စတင့် သင်းအုပ်ဆရာအများစုအတွက် နာကျည်းစရာ၊ ဘုရင်များနှင့် မင်းသားများကို အပ်နှံခြင်းသို့ ဦးတည်စေရုံသာမကဘဲ ကက်သလစ်နှင့် ဆိုရှယ်လစ်များအတွက် အဓိက ပံ့ပိုးကူညီမှုကြောင့်လည်း ဖြစ်သည်။” Reich အဓိပတိ အဒေါ့ဖ် ဟစ်တလာသည် ၁၉၃၃ ခုနှစ်တွင် ဗာတီကန်နှင့် သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့သည့်အချက်က ဂျာမန်နိုင်ငံ၏ အစိတ်အပိုင်းများ မည်မျှ ကြီးမားကျယ်ပြန့်သည်ကို ပြသနေသည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာဖြစ်လာသည်။ Martin Niemöller နှင့် Dietrich Bonhoeffer (1933-1906) တို့ကဲ့သို့ ချာ့ချ်ရှိ ပြောင်မြောက်သော ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများသည် အုပ်ချုပ်မှုမှ ခြွင်းချက်အား ကိုယ်စားပြုကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သိရှိလာသောအခါတွင် ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းနှင့် လူတို့အကြား ခြားနားမှုဆီသို့ ဦးတည်သွားမည့် သဘောထားများကို ကျွန်ုပ်တို့ ကြိုမြင်နိုင်သည်။ Succession ကဲ့သို့သော လက်ရာများတွင် Bonhoeffer သည် 1945 ရာစုတွင် ဂျာမနီရှိလူများ၏ကြောက်ရွံ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သူ၏ထင်မြင်ချက်အတိုင်း ပေးဆောင်ရန် အမှန်တကယ်သတင်းစကားမရှိတော့သည့် အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် အသင်းတော်များ၏အားနည်းချက်ကို အလေးပေးဖော်ပြခဲ့သည်။ “ယုံကြည်ခြင်းရှင်သန်ရာအရပ်တွင်၊” သမိုင်းပညာရှင် Scott Jersak က ဤသို့ရေးသားခဲ့သည်– “[၁၉၁၄-၁၉၁၈] ကဲ့သို့ ဘုရားသခင် [အကြမ်းမဖက်သော] သွေးထွက်သံယိုကို တရားဝင်ဖြစ်စေရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သည့် ချာ့ခ်ျ၏အသံကို ၎င်းအားကိုး၍မရတော့ပါ။ အချည်းနှီးသော Utopian အကောင်းမြင်ဝါဒအတွက်သာမက အစောင့်အကြပ်ရှိသော ခိုလှုံရာသို့ ချော်လဲသွားသော ဆုတ်ခွာခြင်းအတွက်လည်း မရပ်တည်ပါ။” ပထမကမ္ဘာစစ်တွင် ခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာအဖြစ် အမှုထမ်းပြီးနောက် ဂျာမန်ဘာသာရေးဆရာ Paul Tillich (20-1914) သည် ဂျာမနီအသင်းတော်များ အကြီးအကျယ် တိတ်ဆိတ်သွားခြင်း သို့မဟုတ် အဓိပ္ပါယ်မဲ့သွားကြောင်း သဘောပေါက်ခဲ့သည်။ တာဝန်နှင့် အပြောင်းအလဲကို လက်ခံရန် လူထုနှင့် အစိုးရများကို ဆွဲဆောင်ရန် ပြတ်သားသော အသံကို သူတို့ မသုံးနိုင်ခဲ့ပါ။ “အမြင့်လေယာဉ်တွေမှာ အသုံးမချဘူး၊ ငါတို့ ပြုတ်ကျသွားတယ်” ဟု ဟစ်တလာနှင့် တတိယ Reich (1918-1886) ကို ကိုးကားပြီး နောက်ပိုင်းတွင် သူရေးသားခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ မြင်ဖူးသလိုပဲ၊ မျက်မှောက်ခေတ်မှာ စိန်ခေါ်မှုတွေက အမြဲရှိနေတယ်။ ပြင်းထန်သောကမ္ဘာစစ်ကြီး၏ ထိတ်လန့်မှုနှင့် မငြိမ်မသက်မှုများကို အပြည့်အဝအကျိုးသက်ရောက်ရန် ၎င်းသည် အချိန်ယူခဲ့ရသည်။
ထို့ကြောင့်ဂျာမနီ၌သာမက "ဘုရားသခင်ကိုသတ်သောစစ်ပွဲ" ၏အကြီးအကျယ်အကျိုးဆက်များ။ ချာ့ချ်မှဟစ်တလာ၏ထောက်ခံမှုသည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်ပိုမိုဆိုးရွားလှသည့်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဘုရားသခင်အားယုံကြည်ကိုးစားသူများအတွက်အသက်ရှင်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။ ဟူးဘတ်မြို့၏ကြောက်မက်ဖွယ်ဗုံးပေါက်ကွဲမှုအတွင်းသူ၏အတန်းဖော်များစွာ၏ဘဝများအထက်တန်းကျောင်းမှမည်သို့လွတ်မြောက်သွားသည်ကိုJürgen Moltmann အမည်ရှိလူငယ်တစ် ဦး ကသက်သေခံခဲ့ရသည်။ သို့သော်ဤအတွေ့အကြုံကနောက်ဆုံးတွင်သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုပြန်လည်ရှင်သန်စေခဲ့သည်။
“ ၁၉၄၅ ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံစခန်းတစ်ခုမှာစစ်အကျဉ်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဂျာမန် Reich ပြိုလဲခဲ့သည်။ အော့ဇ်ဝစ်သည်ဂျာမန်ယဉ်ကျေးမှုကိုနောက်ဆုံးထိုးနှက်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ဇာတိမြို့ဟမ်းဘတ်ဟာအပျက်အယွင်းတွေကြုံခဲ့ရတယ်။ ဘုရားသခင်နဲ့လူတွေကစွန့်ပစ်ခံထားရတယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ ငယ်ရွယ်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကအဖူးအုံထဲရောက်သွားတယ်။ ဒီအခြေအနေမျိုးမှာအမေရိကန် ၀ န်ကြီးတစ် ဦး ကငါ့ကိုကျမ်းစာတစ်အုပ်ပေးပြီးကျွန်တော်စဖတ်ခဲ့တယ်။ ”
“အကျွန်ုပ်ဘုရားသခင်၊ အကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ကို အဘယ်ကြောင့်စွန့်ပစ်တော်မူသနည်း” (မဿဲ ၂)၊7,46) ကိုးကား၍ ခရစ်ယာန်သတင်းစကား၏ အနှစ်သာရကို ကောင်းစွာနားလည်လာသည်။ သူဤသို့ရှင်းပြသည်– “ဤယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဆင်းရဲဒုက္ခတွင်ရှိသော ဘုရားညီတော်ဖြစ်ကြောင်းကို ကျွန်ုပ်နားလည်ပါသည်။ အကျဉ်းသားများနှင့် စွန့်ပစ်ခံရသူများအား မျှော်လင့်ချက်ပေးသည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို နှိမ့်ချသော အပြစ်မှ ကျွန်ုပ်တို့ကို ရွေးနုတ်ပြီး အနာဂတ် အလားအလာအားလုံးကို လုယူသွားသော […] ကျွန်ုပ်သည် ဘဝတစ်ခုလုံးကို အဆုံးတိုင်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်မည့်အချိန်ကို ရွေးချယ်ရန် သတ္တိရှိခဲ့ပါသည်။ ဆင်းရဲဒုက္ခခံနေရသော ညီတော်ယေရှုနှင့် ဤအစောပိုင်းမိတ်သဟာယဖွဲ့မှုသည် ထိုအချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်အား ဘယ်သောအခါမှ မပျက်ကွက်ခဲ့ပါ။” (ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ခရစ်တော်ကား မည်သူနည်း။
ရာပေါင်းများစွာသောစာအုပ်များ၊ ဆောင်းပါးများနှင့်ဟောပြောပွဲများတွင်Jürgen Moltmann သည်ဘုရားသခင်အားသေလွန်သူမဟုတ်ကြောင်း၊ ခရစ်ယာန်များယေရှုခရစ်ဟုခေါ်ဝေါ်သောသား၏စိတ်ဓာတ်ဖြင့်နေထိုင်သည်ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ “ ဘုရားသခင်ကိုသတ်သောစစ်” ဟုအခေါ်အနှစ် ၁၀၀ အကြာ၌ပင်လူတို့သည်ငါတို့ခေတ်ရှိအန္တရာယ်များနှင့်မငြိမ်မသက်မှုများမှတစ်ဆင့်ယေရှုခရစ်၌လမ်းရှာနေရခြင်းသည်မည်မျှစွဲမှတ်ဖွယ်ကောင်းသနည်း။